Ukupheliswa Ukupheliswa kweqela labaphembeleli abahlawulwayo: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo Ukupheliswa Ukupheliswa, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	8 Oktobha 2019	• 1 Comment
Ewe, akufuneki uxelele nabani na onamathela kakhulu kwimithombo yeendaba nakwimidlalo yezopolitiko. Uqhanqalazo oluDlulisayo, olungakhange lukhutshwe selayisensi nakanjani, bohlulwa ngokucokisekileyo ngabadlali bekhamera bemithombo yeendaba kunye nokubanjwa akukho nto ngaphandle komboniso wekhamera. Ngokwenyani bambalwa abantu abanokujonga okuqhelekileyo (kancinci kakhulu ngemfashini), abanokufumana imali encinci yokumisa intente okokuqala ebomini babo kwaye abanalo nofifi lokuba bathetha ngantoni.
Umsasazi wePowNed, unokuphumelela ukuzuza ezinye iikhredithi ngokubonisa ngokucacileyo ukuba abantu abancinci abazi nokuba i-CO2 isisichaziweyo sekhabhoni dioksijini, ngeli xesha ngoku ubungqina obu rhoqo apha uyibonile kwisiza ukuba imiboniso enjalo, kubandakanya imibhikisho kunye nokubanjwa, ziphantsi ngokupheleleyo kwendlela kwaye babethwa yiPowNed efanayo. Kodwa ngokuthunyelwa kwebhanti yomsele wamanzi embizeni-kwaye-kwaye 'ngoko ke' uThierry Baudet umfanekiso) intatheli uyicinezela kwi-indima yexhoba kunye nembali ibonakalise ukuba yonke into oyinika imeko yexhoba iya kuthi ekugqibeleni ifumane ubume bokungabikho.
NgeCawa 10 ngo-Epreli 2016 ndaya e-The Hague kunye nomhlobo wakhe ukujonga imbonakalo ka-Pegida kwaye ndibona ukuba umfanekiso oboniswe yimithombo yeendaba uyahambelana na noqobo. Kungekudala saqonda ukuba oku akunjalo kwaphela. Sabona ngamehlo ethu ukuba lo mboniso ubethwe ngokupheleleyo yimithombo yeendaba nokuba umboniso kunye nokuzibonakalisa, kubandakanya ukubanjwa, sele kugqityiwe.
Imini iqale kakuhle, xa sinekomityi yekofu ejikeleze kwisiqingatha se-1 emva kwemini kwaye ndiye ndaqala ukufota ngokuvalela ngasemva kocingo olujonge isikwere se-Spui. Kwangoko abathunywa babini beza kuthi bazokucela i-ID yakho. Ngapha koko, kwenzeka ukuba ngokwenene benze le nto kubo bonke abadlulayo. Inani lamapolisa akhoyo lalilikhulu kakhulu xa kuthelekiswa neqela labantu ababonisa uvavanyo. Ndiqikelela ukuba bekukho iiarhente ze500 kubaqhankqalazi be50. Oku kuthelekiswa nemiyalezo kwimithombo yeendaba ephambili, ebanga ukuba ikho Ababonisi be100 zazikhona. Oko kunokubonakala ngathi kunjalo, kuba xa bejikeleza i-1 babejikeleza intatheli ye-1, iifoto okanye i-cameramen. Ngokwenene yayingumboniso olusizi. Ukubuya kwabantu kwakungekho nto ibalulekileyo. Kwenzeka into efanayo nakumboniso we-Antifa.
Kwanangaphambi komboniso, kwenziwa inzame yokufaka ukubanjwa ngenxa yokuba I-'M 'ngokuphuma kumbala woblowu UFrank van der Linde ubanjiwe. Oku kwabonakala kuvunyelwene kwangaphambili, kuba zonke iikhamera kunye nemifanekiso yababesazi ngalo mzuzu kwaye zilungele ukuthatha imifanekiso. Akuyonto ingekhoyo ukuba uFrank azibize ngokuba yintshatsheli enobuchule, kuba ngokwenene yayikhangeleka ngathi sisenzo esihlaziyiweyo. Nangona kunjalo, ayingobuchule kangangokuba enye imithombo yeendaba ithathelwe ingqalelo ngeli xesha. Kwenzeka ntoni? UVan der Linde akazange abanjwe konke konke ngasemva kweveni, kodwa wayencokola nje imizuzu kunye neenjengele ezazisandul 'ukumthatha "ngolunya" phambi kweekhamera. Belt! (Jonga imifanekiso yevidiyo ezantsi kwenqaku)
Umboniso ngokwawo unazo zonke izinto zeseti emiselweyo. Inqwelo-ntaka yamapolisa yagqibezela isenzo. Kuthengisiwe yayikhona kunye ne-cameraman: i-blonde esondela kuphela kwiintlobo ze-wierdo kunye nomlawuli. Ukongeza, uneqela elivela kwi-NOS, iTelegraaf, kwi-omroep West kwaye awunakuyicingela loo nto imbi. Lifanele lenze ntoni ilizwe lonke losasazo ngemiboniso enjalo? Impendulo sele inokuqikelelwa. Kuya kubonakala ngathi impumelelo enkulu iyaphunyezwa ngokuphembelela amaqela ngokuchaseneyo. Akukho nto iyinyani. Ukuphuma kubandakanya into engaphezulu kwembinana yabantu abaziqeshileyo, kanye njengokuba sibona ngoku kwi-Reinion Rebellion. Hayi, andikhange ndibone itshekhi yokuhlawula engqina ukuba baqeshiwe, kodwa kwakungekho nto ngaphandle kwenkampani enemibala emininzi ukuba iqela lasePegida lasekunene lifumene iibhanti ezichanekileyo kunye nemiqondiso ezandleni zabo ngexesha elifanelekileyo emva koko bazibeka phambi kwabo. ukubeka ikhamera. Yonke into ejikeleze kwiikhamera ezikhoyo kunye neesibhamu. Kwaye PowNed of course wenziwe udliwanondlebe kuzo zonke ezi silly ezijonge ezongeziweyo.
Ngexesha elithile ndandimamele udliwanondlebe nguPowNed nenenekazi elineenwele ezibomvu. Xa ebuzwa kamva, kwavela ukuba uhlala ebumelwaneni kwaye unebhlog yakhe, kwaye wayefunde okuthile kwincoko eyayiphakathi kwamapolisa. Wayevile ukuba kukho inombolo ye-25 yeqela elichasene noqhanqalazo eBurgerking elungele ukuhlasela ababhikishi be-Pegida. Jonga ividiyo apha ngezantsi. Ngendlela, ukuba uva ingxolo engasemva, ivakala ngokungathi zinentetho ezinomtsalane. Ezo yayingeyiyo into eyodlula abantu be-4, kubandakanywa nomphathi we-Pegida wase-Netherlands u-Edwin Wagensveld kunye nabantu abambalwa ababefunda inowuthi ngokuvakalayo.
Ndigqibe kwelokuba ndihambe phambi komboniso kwaye ndiqwalasele iBurgerking ekhankanywe inenekazi elinenwele ezibomvu. Kwaye ewe, zazikho: abo babelwela u-Antifa. Ndibabiza ngokuba ngoqhanqalazo-ukongeza, kuba konke malunga nesenzo. Naxa kwakudlalwa ubundlongondlongo, amalungu amaninzi eli qela abeka ibunzi elibukhali ebusweni babo, apho unokuqaphela ukuba babedlala. Kwakucacile ukuba yonke iklabhu yase-Antifa ibekwe kuloo Burgerking ukuze ikwazi ukuseta ukubanjwa. Kuba kutheni ubamba iqela kwiBurgerking kude kudlule umboniso wePegida emva koko ubakhuphele ngaphandle kweBurgerking phambi kwamaqela onke nokubabamba kwimizuzwana ye-2? Ngokuqinisekileyo ngewukwenzile oko ngaphambili? Babelungele isenzo sabo. Ukubanjwa bekungekho nto ngaphandle komboniso ophambi kweekhamera. Ndasweleka kwakhona!
Kwakumnandi kakhulu ukubona umboniso ebiyelwe ngokupheleleyo NGAM ndihamba phakathi edolophini kwaye kanjani ngaphandle kwento efanayo kunye nesiqubulo esifanayo "AZC kunye nayo!Apha kucace gca ukuba olu hambo lokuhambahamba phakathi kwesixeko lwalulutho ngaphandle komdlalo; Injongo yokucwangcisa isiphithiphithi esincinci eBurgerking yeqela lekhamera kunye neefoto ezikhoyo. Ukubanjwa kwe-54 kuxelwe ku-Antifa kwimidiya kuye kwagqithisa kakhulu. Ngapha koko, yayingengomboniso wokwenyani. Umnyango we-Burgerking uvulwe ngamagosa afanayo abesebenze imizuzwana ye-2 emva kokubanjwa. Unokuxelela malunga nokuba bangaphi na ukongezelwa ababekhona kwiBurgerking. Ngendlela, kwakungekho basebenzi kwiBurgerking, ngoko ke ngokucacileyo indawo yayiqeshiselwe.
Isizathu sokuba undwendwelo ku-The Hague lube kukuzibonela ngawakho amehlo ukuba imiboniso enjalo imiselwe njani kwaye njani kwaye isebenza njani ngokuthembekileyo. In 2013 ndazibona ukuba yonke imiboniso yenziwe ngokupheleleyo. Kungabonakala ngoku ukuba esi sigqibo sichanekile.
Ukuba ucinga ukubonisa kwakhona, yazi ukuba yonke into iphantsi kolawulo lukarhulumente. Ewe ewe, kunye nemoto yekhamera yamapolisa ekhoyo (jonga ibhasi emhlophe kolu luhlu lweefoto) ixhotywe ziikhamera ezininzi ejikeleze ibhasi kunye neekhamera ezimbini ezijikelezayo ezinomfanekiso bhanyabhanya owenza yonke into kwaye kusenokwenzeka ukuba ubuso bakho babhalisiwe ukuba umncinci nje phakathi indawo ekufutshane. Ke singatsho ngokuqinisekileyo kunye ne-100% ukuba imiboniso iyaqhutywa. Yonke into ilawulwa ngurhulumente wamapolisa. Ngaba ngokwenene sicinga ukuba akukho mbutho emva kwale miboniso yoHlaselo oluPheleleyo kwihlabathi liphela? Ngokuqinisekileyo kukho umbutho emva koko! Yintsimi yamandla asekhohlo ekuthiwa ixhaswa nguGeorge Soros ngasekunene (jonga apha), kodwa ekugqibeleni zombini ngasekhohlo nasekunene zicwangciswe liqela elitist kwaye uphawu luya kubethwa ngakwesokunene (bona eli nqaku ngolwazi oluneenkcukacha), ukuze imephu yendlela eya kurhulumente wehlabathi iphunyezwe 'ngokutshintsha kwemozulu' njengesizathu esibalulekileyo. Trumanshow!
Uludwe lwekhonkco lovimba: nu.nl, notalotofpeoplenowthat.wordpress.com
Ngoobani abantu abaphikisana nabo basebenzi be-yellow? Ubungqina bobugqwetha obungenayo
Ukungabi namadoda kunye neenkokeli zezopolitiko ezide kakhulu eYurophu
Isosi yesigqibo sokukhetha ukhetho lukaMasipala kwiBar: uTeerry Baudet kunye nabanye abalingisi kwi-steam
Izicwangciso zeeholide Aruba, Bonaire, eCuraçao? Yilungiselele imfazwe eqaliswe yi-USA kunye neziqithi ze-ABC njenge-hub
Iimvane eziNtsundu zibhikisha ngoMgqibelo olandelayo: ubungqina benkqubo yokubhikisha elawulwa nguRhulumente?
tags: Amsterdam, bonisa, Ukupheliswa Ukupheliswa, eziziimbalasane, khangela, ixhaswe, George, mbhikisho, Soros, izixeko, hlabathi
9 Oktobha 2019 kwi-16: 30
U-Sly femme Halsema ufunde lukhulu kwikhabhathi yemidlalo yeqonga. bona iParool namhlanje phantsi kwekhonkco
AmaProtestanti akhusela ababizwa ngokuba ngamaProtestanti ngamapolisa kunye ne-ME, eyabathintela ekuguqukeni.
Ngobuchule dlala loo mdlalo. Kwaye kwangaxeshanye ubize i-Timmermans upapa wemozulu,
konke kungabonakala ngakumbi, kukutya kootitshala bezentlalo.
Ndaze ndeva ukuba phakathi kwe (fake) abaqhankqalazi yayingabantu abancinci
bonwabela uqeqesho lomyalelo phesheya, oko akuyi kuba yinyani?
I-95% ye (i-fake) abaqhankqalazi ibivela kwamanye amazwe.
Oh kutheni ke ??? Impendulo: "Ke azaziwa ngokukhawuleza"
« Uhlobo 'lungelo' kunye nesicwangciso sobuchule sokuthengisa ngentengiso
I-Turkish ikhubekisa i-Syria i-harbinger kwi-Europe »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.130.036
SalmonInClick op I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2)
Joyina amanye ama-1.653 ababhalisile